माछा केक कसरी खाना पकाउनु
माछा मात्र होइन एक स्वादिष्ट उत्पादन, तर पनि किनभने यो मा निहित भिटामिन र खनिज को धेरै उपयोगी छ। माछा व्यञ्जन किन हरेक व्यक्ति मेनुमा वर्तमान हुनुपर्छ भन्ने छ। माछा, सुखा पकाएको, निभाउँछ, तला गर्न सकिँदैन, धमाकेदार र यति मा। स्वादिष्ट fishcakes मात्र होइन परिवार, तर पनि मित्र स्वाद कुनै पनि तालिका विविधता गर्न सक्षम र उपयोगी छन्।
यो पकवान तयार गर्न, तपाईं निम्न उत्पादनहरु तयार गर्नुपर्छ:
कड वा pollack माछा - 500 ग्राम;
अन्डा - 1 पीसी;।
रोल - 100 ग्राम;
पीठो - 50 ग्राम;
मध्यम प्याज -2पीसी;।
बोसो - 50 ग्राम;
माछा को हड्डी प्याज बोक्रा र पानी मा भिगो रोटी को एक आवारागर्दी ~ अलग हुनुपर्छ। एक मासु Grinder मार्फत सुंगुरको बोसो टुक्रा मिलेर यो सबै छोड्नुहोस्। अर्को, परिणाम Mince नुन र मरिच थप्न र फ्लफी homogeneous ठूलो प्राप्त सम्म मिश्रण। समय फारम आएको छ कीमा बनाएको मासु patties, को त्यसपछि सुनको खैरो प्राप्त गर्न पीठो मा रोल जुन, र त्यसपछि वनस्पति तेल को अनिवार्य साथै संग कराइ तिनीहरूलाई तलना। कसरी, माछा केक तलना यसो भन्न थप केही, तर तपाईं आफ्नो स्वाद सुधार गर्न अरू केहि गर्न पर्छ जान्न। माछा देखि बाँकी Ridges पनि उपयोगी हुन, तिनीहरूले आटा र भुट्नु मा तान्नुहोस् पर्छ, र पछि तिनीहरूले झुलसे छैन भनेर मासुको चोक्टा बुझाने गर्न प्रयोग गरिनेछ। सबै तयार हुँदा भुना हड्डी meatballs संग पैन तल र माथि राखे हुनुपर्छ, केवल ridges ढाक्न पर्याप्त छ जो एक पैन केही पानी, मा खन्याउन। cutlets बुझाने न्यूनतम आगो मा 5-7 मिनेट रहन्छ।
तपाईं कसरी फरक fillings संग माछा केक खाना पकाउनु सोच छ भने, त्यसपछि हामी यसलाई इच्छित भर्ने, जो हुनेछ माछा संग संयुक्त गर्न चयन गरेर परीक्षण गर्न सम्भव छ यहाँ भनेर भन्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, भर्नको उसिनेर अन्डा, तरकारी, मशरूम, प्याज को एक मिश्रण रूपमा सेवा गर्न सक्छन्।
तपाईं माछा पकाउन सक्नुहुन्छ डबल बयलर मा cutlets। तिनीहरूले सजिलो प्राप्त खाना पकाउने यो विधि संग, कोमल, अविश्वसनीय स्वादिष्ट, कि हामी एक चुलो अगाडि खर्च गर्न भनेर समय को लागि एक ठूलो इनाम हुनेछ।
कसरी खाना पकाउनु माछा केक एक डबल बयलर को मद्दतले? यो उत्पादन एक अलि फरक सेट आवश्यक हुनेछ:
प्याज -2पीसी;।
मध्यम आकार को आलु - 2-3 पीसी।
हरियो - नुन को 150 ग्राम।
यो प्याज र आलु सफा गर्न एक मासु Grinder मार्फत माछा संग तरकारी छोड्न आवश्यक छ, र माछा राम्ररी हड्डी बाट साफ हुनुपर्छ। यस तपाईँलाई धेरै सूक्ष्मता ह्याक छ जो कीमा बनाएको अन्डा र साग, थप्नु पर्छ। त्यो तपाईं नुन र राम्ररी मिश्रित थप्न आवश्यक सबै छ। कसरी माछा केक पकाउन गर्न रूपमा, त्यसपछि हामी यो सबै छ भनेर भन्न सकिन्छ। यो केवल patties गठन र एक steamer तिनीहरूलाई राख्न रहनेछ। सम्म तिनीहरूले तालिका सेवा गर्न सकिन्छ, जो पछि 20 मिनेट, को लागि तयार।
सानो ट्वीक्स: माछा केक कसरी खाना पकाउनु
यो पकवान सिर्जना समयमा, त्यहाँ बिल्कुल केही जटिल छ। अझै स्वादिष्ट र लागि कोमल cutlets केही प्रयास गर्न आवश्यक छ। तपाईं सानो चाल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। लागि रसदार cutlets माछा Mince पोर्क वा चिकन गर्न थप गर्न सकिन्छ। Salò यो मामला मा पनि पूर्ण अधिकार छ, तर कीमा बनाएको सुनिश्चित। घिउ हरेक टुक्रा मा डाल cutlets को गठन, त्यसपछि पनि ठूलो स्वाद भने। meatballs माछा राम्रो स्वाद सुरक्षित गर्नेछ भन्ने एक ठूलो ग्रिल मासु Grinder पास गर्नुपर्छ तयार। प्याज प्राप्त बाहिर सुखाने देखि मासु छुटकारा मद्दत गर्छ। आटा सूजी प्रतिस्थापन गर्न आवश्यकता मा ह्यामबर्गर्स खाना पकाउने गर्दा, त्यसैले तिनीहरू थप रसदार प्राप्त हुनेछ।
यो पकवान एक garnish सिद्ध आलु, पास्ता, चामल र कुनै पनि तरकारी छ रूपमा। खानपान!
को curd सुखा हलुआ पकाउन कसरी केही सुझावहरू
लसुन तीर: छिटो र सजिलै खटाई मा हालन!
6 curd तयार हुनेछ विचार
के उत्पादनहरु सुपरमार्केट मा खरीद मूल्य?
आटोक्लेव - खाद्य प्रशोधन लागि उपकरण
विभिन्न उत्पादनहरु को एक hodgepodge कसरी कुक गर्न
गुगल क्रोम, लुकेका सेटिङहरू: वर्णन, सुविधा र समीक्षा
8 जुलाई - स्लाव भाषाहरु प्रणय दिवस
£ 10। कति rubles मा छ?
Prut नदी: भूगोल, समुद्र तट, माछा मार्ने र पर्यटन
आपूर्ति श्रृंखला के हो? प्रस्तुति सामाग्री
आत्म को "शेवरलेट Lacetti" मा समय बेल्ट प्रतिस्थापन
Novella Matveeva: जीवनी, परिवार, रचनात्मकता
पाइक लागि lures
आर्मेनियाली विहारको Surb Khach: विवरण, इतिहास र रोचक तथ्य
Govard Filips Lovecraft: साहित्यिक सम्पदाको
सैन्य मान्छे किन सपना देखाउँछन्? सपना पुस्तकले बताउनेछ!
ELSA Pataky (ELSA Pataky): जीवनी, Filmography र अभिनेत्री को व्यक्तिगत जीवन (फोटो)